LEGO ကိုဘယ်လိုထိခိုက်ခဲ့လဲ Marvel DC ရုပ်ရှင်သည် ၂၀၂၁ တွင်နောက်ကျလိမ့်မည်
17 / 08 / 2021 18 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 288 Views စာ0မှတ်ချက် 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase, 76176 ဆယ်ကွင်းမှလွတ်မြောက်, 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ, Black ကမုဆိုးမ, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, အရူးဖြစ်၏ ဟူ. ၎င်း၏ Multiverse အတွက်ဆရာဝန်ထူးဆန်း, နိစ္စထာဝရ, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Infinity Saga, Jesper Nielsen, Lego, Lego Batman, Lego DC က, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Mark Stafford, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Marvel စတူဒီယို, Shang-Chi နှင့်ဆယ်ပါးလက်စွပ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ, Spider-Man, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Man: အိမ်သို့, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, အဆိုပါ Batman, အဆိုပါ LEGO Group, Warner Bros.
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့ကနှောင့်နှေးပုံကိုရှင်းပြသည် Marvel နှင့် DC ရုပ်ရှင်များသည်ယခုနှစ်စူပါဟီးရိုးအတွဲများ၏တန်းစီမှုကိုထိခိုက်စေသည်။
နှစ်ခုလုံး Marvel Studios နှင့် Warner Bros. (နောက်မှဖြန့်ဖြူးသူများ DC’s movies) were forced to delay multiple XNUMX and XNUMX movies to either later this year or into XNUMX asaresult of the pandemic, including Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man: No Way Home, The Batmanရူးသွပ်မှုမျိုးစုံနဲ့ Doctor Strange
ထိုထုတ်ဝေမှုအချို့အတွက် - partstent တစ်ဝိုက်ရှိသူများart Black Widow အပါအ ၀ င်ကူးစက်ရောဂါနှင့်သော့ခတ်မှုများ Lego အဖွဲ့သည်အချိန်မီမတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ပါ။ 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase ၂၀၂၀ မတ်လတွင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းစင်ပေါ်သို့ဆင်းခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းနှင့်အတူပါလာသည် Marvel Cinematic Universe ရုပ်ရှင်သည်နောက်ထပ် ၁၆ လကြာရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ရောက်မလာခဲ့ပေ။
In other cases, however, the Super Heroes team has been able to be slightly more agile. The Eternals sets were unveiled inaconsumer catalogue back in ဒီဇင်ဘာလတွင် 2020၎င်းတို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည်ဟုဆိုသည်။ ဒီဇာတ်ကားကိုဖေဖော်ဝါရီကနေ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိနောက်ဆုတ်ထားပြီး၊ Lego အုပ်စုများသည်ခြေလှမ်းများကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့သည်။
“ ဒါကခက်ခဲတယ်၊ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ [ဒီရုပ်ရှင်တွေကမင်းထက်ပိုနောက်ကျမယ်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး” Lego ဒီဇိုင်နာ Mark Stafford ကပြောထားပါတယ် Brick Fanaticsမရ။ “ ရုပ်ရှင်စတင်ပြသတာလေးလလောက်ကြာတဲ့အခါငါတို့က 'ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မှာအစုံရှိသေးတယ်၊ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။
“But whenamonth later that’s pushed back another four months, we haveachance – like with The Eternals – to say, ‘Okay, let’s wait until the movie’s coming out.’ So we can hold those, but of course then there isabig hole in [the Lego အုပ်စု] ၏မျှော်မှန်းထားသော ၀ င်ငွေကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်လျော့ပါးရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ”
၎င်းသည် Infinity Saga ၏ပထမအဆင့်သုံးဆင့်သို့ပြန်သွားသည်ဟုဆိုလိုသလား Marvel Cinematic Universe – including 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off နှင့် ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem - အဲဒီကွက်လပ်ကိုဖြည့်ဖို့အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာလား။
“ ဒါကတကယ်တော့နောက်ကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူး” လို့ပြောတယ် Lego Super Heroes Creative Lead Jesper Nielsen. “Those were planned originally, because we think there’sahuge wealth of things we haven’t been able to do XNUMX% correctly, because before the movies, we don’t have all the reference material.”
“ ငါတို့အများကြီးရှိခဲ့တယ် ideas ငါတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောပါ” ဟု Mark ကထပ်ပြောသည်။ "ငါ p ကိုသတိမထားမိဘူးarticular crunch သည်အချိန်သို့မဟုတ်ဘာမဆိုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းကဲ့သို့တူညီသောဒီဇိုင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။ ”
နောက်ဆုံးပေါ် Marvel Cinematic Universe sets, 76176 ဆယ်ပါးလက်စွပ်မှလွတ်မြောက် နှင့် 76177 ရှေးကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် Shang-Chi နှင့် Legend of the Ten Rings တို့ကို အခြေခံ၍ ၎င်းနှစ်ခုလုံးကိုယခုရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ရနိုင်သည်။
Three sets အခြေခံ Spider-Man: No Way Home (or, one set plus two ‘inspired by’ Spider-Man: အိမ်ပြန်နှင့် Spider-Man: Far From Home) will then arrive in October, while the four already-revealed Eternals sets are still waiting onafinal release date.
For more from the Lego Super Heroes အဖွဲ့၊ ၂၀၂၁ အတွက်နောက်ဆုံးရုပ်ရှင် slate သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုလေ့လာပါ apparently to blame for the lack of Batman နှင့် DC ဒီနှစ်မှာစတင်ထုတ်ဝေမှာပါ။
← Star WarsVisions သည်နောက်လတွင်ရုံတင်ပြသမည့်နမူနာအသစ်ကိုရရှိသည်
LEGO Lord of the Rings Minas Tirith ပရောဂျက်သည် LEGO တွင် 10K ထိခဲ့သည် Ideas →